Amazon Kindle Paperwhite 2015 ukubuyekeza: sharpest futhi best okwamanje - Izindaba Rule
Uhlelo olusha Kindle Paperwhite iyona Amazon best okwamanje. ukukhanya Its, Kulula ubambe kanye nokusetshenziswa, kuyilapho screen omunye crispest e-paper screen ngikubonile. Kwenza ukufunda ubumnandi futhi ngifunda ngoba isikhathi eside kunami angavamile.
Lesi sihloko osesikhundleni “Amazon Kindle Paperwhite 2015 ukubuyekeza: sharpest futhi best okwamanje” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesibili 23 June 2015 06.00 UTC
Kindle Amazon yakamuva yisihumusho olusha of Paperwhite yayo, Manje nge crisper futhi kulula ukufunda screen ne kabili isibalo pixels.
I Paperwhite iyona Kindle Midrange, ngezansi phezulu-of-the-line £ 170 Voyage othembisa zonke bell futhi ashaye ikhwelo, futhi ngaphezu £ 50 Kindle eziyisisekelo. Kodwa Amazon uye kudliwa ku kuwusizo Voyage sika ngokunika Paperwhite entsha elifanayo nesinqumo e-paper njengoba iwuhlelo yayo?
Simple design monochromatic
Backlight kwenza isibuko e-paper zibonakala zimhlophe futhi adjustable ngokusebenzisa 24 amazinga. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Kusukela ngaphandle kunzima ukubona ukuthi yini eshintshile. Kuyinto design efanayo screen-egxile. Ngemuva ehlanganiswa a plastic soft-touch, front Bezel kunzima futhi kancane grey ezingaphezu kuka isizukulwane esedlule.
Azikho izinkinobho ahluke inkinobho amandla emaphethelweni phansi - esithintwayo enakekela bonke abanye. Swayipha noma uthinte ngakwesokunene ukuze uvule ikhasi, kwesokunxele ukuya emuva. Thinta phezulu ukunxusa imenyu bese ushintsha amasethingi, ulungise backlight noma khetha incwadi entsha.
Uma wake wasebenzisa Kindle noma yimuphi omunye e-reader it kuyoba ngokushesha ajwayelekile.
Isikrini 6in kugxilwa. It has kabili isibalo pixels kanye kwabantu isihenqo 88 pixels more ye-intshi ngayinye (PPI) ukwedlula Paperwhite isizukulwane esedlule at 300PPI, okuyinto ephawuleka lapho ufunda umbhalo. Ukuze uqhathanise le Kindle eshibhe kubiza £ 49 has a screen 6in nge 167PPI, okuyinto kubonakale akwaziwa kahle.
Related: The Guardian and Observer manje kuyatholakala kwi Kindle
Ngaphambili ukukhanya kwenza page avele white, okuyilapho igama layo livela, futhi kungenziwa ngesandla lulungiswe ngempela elikhanyayo kakhulu omncane sokufunda ebumnyameni. Backlight kuyinto ngisho phesheya page, kodwa ngaphansi kwekhasi ubukeka kancane grayer.
Kuyinto screen best ezake zifakwa the Paperwhite, futhi ngenkathi olufana Kindle eqolo, the £ 170 Voyage, phezu kwe-pixel count akusona ngempela izinga okusezingeni eliphezulu njengoba.
Screen: 6e-paper (300ppi)
Ubukhulu: 169 x 117 x 9.1 mm
Isisindo: 205g (3G version 217g)
Ukuxhumana: Wi-Fi (3G ozikhethela)
impilo yebhethri: ezilinganiselwe cishe 21 amahora of reading
amafonti New nezici
I Bookerly font yakhelwe ukuba ibe lula ukufunda ku-screen. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Amazon has a font entsha for kokhela yayo ebizwa ngokuthi Bookerly, esiklanyelwe kokufunda screen kunokuba okubhaliwe, nezici ezintsha ukuhlelwa. Kuhlanganiswe Zikwenza ukufunda ku screen lula kunaleyo usebenzisa zabuna ezifana Helvetica. Ngathola iso-ubunzima kwakungeyona inkinga endabeni yokuhlonishwa, ngisho isikhathi eside ekufundeni sessions - kuba kimi ukufunda on screen on smartphone noma tablet.
Amazon X-ray, netinkhomba, izwi look-up and inqubekela izinkomba, okuyinto ngithi kini koze kuzothatha wena uqede isahluko, bonke eseceleni kanye nesithakazelo kubo umuzwa wokufunda.
Bamba umunwe igama noma igama kanye nesimongcondvo ulwazi olubucayi ibhokisi pops up, okuyinto usizo ikakhulukazi imigomo esifushanisiwe, nema noma izinhlamvu ngabe ukhohliwe mayelana.
Ngokushesha futhi kuyaqhubeka 21 amahora
Khohlwa umlingisi? Isici-X ray kwenza kube lula ukugcina ithrekhi ngubani ongubani. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I Paperwhite entsha ubuye kancane ngokushesha futhi isabele kakhulu kanti siwele esibonakalayo kuka isizukulwane esedlule. Akukona angi esibhebheni premium, kodwa uzizwa kushesha ngoba ie-reader.
I Paperwhite ukala 205g, kuyinto 9.1mm aminyene futhi kulula kakhulu ukuba ngiyibambe ngesandla esisodwa. Turning ikhasi esithintwayo kulula ngezandla ezimbili, kancane elilodwa - buttons ngakwesokudla- futhi sobunxele imiphetho ekuphendukiseni ikhasi Kungaba mnandi.
Amazon uthi Paperwhite ithatha amasonto ayisithupha ukufunda 30 imizuzu ngosuku (21 amahora isiyonke) ne ukugqama isethwe ku 10 koku 24 amazinga. Yilokho esingaphansi kwamasonto amabili ukwedlula Paperwhite odlule izilungiselelo efanayo, kodwa kalula eside ngokwanele ukuze uqedele incwadi noma ezimbili.
Ngakwazi uqede izincwadi ezimbili enamakhasi angu-400 nge imodi yendiza phambi adinge ashona Paperwhite. Ukushiya Wi-Fi kanye 3G zokuxhuma on likhanyelwe ibhethri ngokushesha.
I black soft-touch emuva Kulula grip kodwa ucosha uthuli. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The Kindle Paperwhite 2015 kubiza kuyafana isizukulwane esedlule at £ 109,99 for a Wi-Fi version kuphela nge Izipesheli, okungenakuqhathaniswa, okuletha ukuthula izikhangisi kwi Lockscreen izincwadi kanye nezinye izingcezu.
A version 3G iyatholakala kubiza £ 169,99, ngenkathi kususwa izikhangiso izindleko £ 10. It okwamanje itholakala uku-oda ukuthumela ku 30 June.
Akusiwona igxathu elikhulu phezu ngonyaka odlule Kindle Paperwhite noma owokuqala, kodwa umehluko omkhulu phezu Kindle Amazon eziyisisekelo futhi iyona engcono kunamanye izimbangi kakhulu ontengo yakhe yayinqunyiwe efanayo.
Iphinde akuyona akamuhle kangako njengoba Voyage, okuyinto namanje ozithandayo e-reader yami, kodwa kuyinto £ 60 engabizi.
Ngakho-ke Paperwhite kuyinto umuntu olunzulu book umfundi, angathanda ukufinyelela umtapo Amazon elikhulu futhi Akanandaba kokuba bevaleleke it, kodwa awukwazi isisu kokukhokha lokungetulu kwekumane £ 100 idivayisi single-ukusetshenziswa. Ngoba leyo njongo, kuba omuhle.
Buhle: isihenqo esikhulu, Kulula ukusebenzisa, bheka-up and-X ray izici umkhulu, ngisho backlight, uhla enkulu izesekeli, olunzulu ncwadi esitolo
Bawo: kuqhathaniswa eqolo idivayisi single-ukusetshenziswa, akukho yini izinguquko ngokuzenzekelayo backlight, akukho izinkinobho page baphendukela
Words, nema, izifinyezo kanye nemibhalo lengentansi basuke bonke ifinyelelwe nje ubambe umunwe phezu izinhlamvu. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
• Amazon Kindle Voyage ukubuyekeza: izinga ezibizayo kodwa top e-reader
• Kindle Ukubuyekeza Paperwhite: screen phambi okwanele kwenza ukufunda nemnandi
• Tesco Hudl 2 ukubuyekeza: a lot of tablet for imali
• Apple iPad mini 3 ukubuyekeza: a uthinte ngaphezulu okufanayo
• Ukubuyekeza Samsung Galaxy Tab S: imbangi for the iPad?
Sony PS4 ngeke ukusekela MP3, Noma engeqile Audio CD
Samsung has begun bashing out DDR4 20nm memory mod...
Google Glass - Abantu Phambili Ukubotjhwa
Amazon.com, Isigaba, E-abafundi, Gadgets, Kindle, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, Technology
← Ingabe the Nokia 3210 ifoni okukhulu kunakho konke emlandweni? Parkinson nokucindezeleka izidakamizwa ongaguqula nokwahlulela ezindabeni zokuziphatha, Ukutadisha imibukiso →